နွေဦးနှင့်လေရူးဆိုတဲ့သူငယ်ချင်း (၂) ယောက် နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာ ဘာတွေများ ငြင်း… – PVTV Myanmar
နွေဦးနှင့်လေရူးဆိုတဲ့သူငယ်ချင်း (၂) ယောက် နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာ ဘာတွေများ ငြင်း…
·7months ago ·25 Comments
နွေဦးနှင့်လေရူးဆိုတဲ့သူငယ်ချင်း (၂) ယောက် နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာ ဘာတွေများ ငြင်းကြ၊ ခုန်ကြ၊ စကားရည်လုကြမလဲဆိုတာကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 4.1K Share – 441
2021-07-06 at 8:48 PM
2021-07-06 at 8:51 PM
Hunny Htun says:
2021-07-06 at 8:52 PM
2021-07-06 at 8:56 PM
အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္ ေအာင္ကုိေအာင္ရမည္
2021-07-06 at 9:03 PM
တကယ္ေကာင္းတယ္ ေပးခ်င္တဲ့ massage ကို ထိေရာက္ေအာင္ေျပာသြားတာ
2021-07-06 at 9:28 PM
2021-07-06 at 9:37 PM
2021-07-06 at 9:38 PM
Minn Waiwai says:
2021-07-06 at 9:41 PM
Ko Tint Ko Tint says:
2021-07-06 at 10:09 PM
2021-07-07 at 7:03 AM
ေလးစားပါတယ္ ေအာင္ျမင္ပါေစ တို႔ျပည္သူေတြ ႏိုင္ကိုႏိုင္ရမည္
2021-07-07 at 8:12 AM
ေလးစားတယ္ ျပည္သူေတြကို အမ်ားျကီး ခ်ျပစရာ မလိုေတာ့ဘူး ျပည္သူရင္ထဲ႕ မွာ ခံစာခ်က္ေတြက အတူတူဘဲ ေလ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္
Chaw Khin Khin says:
အားမလို အားမရ တစ်ခါမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
But စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်းတော့ အခြားသူကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ $ ကူညီလိုက်တယ်.
ဇာတ်ကားတိုင်းမှာ လူဆိုးက ဆိုးပြီးရင် ရှံူးနေကြစမြဲပဲ.
2021-07-07 at 1:33 PM
Kyaw MYo Oo says:
2021-07-07 at 1:58 PM
Min Sayyin says:
2021-07-07 at 5:13 PM
Salai Morata says:
2021-07-07 at 8:02 PM
Kyi Nue Khin says:
2021-07-07 at 9:16 PM
2021-07-08 at 2:12 AM
မ်ဳိး မ်ဳိး says:
2021-07-08 at 9:20 PM
2021-07-09 at 3:31 AM
Ma Nilar says:
2021-07-10 at 3:22 PM
Kyaw Thu Htike says:
ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့်…